Sii-hayaha xilka R/wasaaraha oo Shir guddoomiyay kulan ku saabsan xaaladaha deg-degga | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Sii-hayaha xilka R/wasaaraha oo Shir guddoomiyay kulan ku saabsan xaaladaha deg-degga
Sii-hayaha xilka R/wasaaraha oo Shir guddoomiyay kulan ku saabsan xaaladaha deg-degga
Muqdisho (Halqaran.com) – Sii-hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka, Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta guddoomiyay shir looga hadlay ka jawaabidda xaaladaha degdegga ah ee dalka ka jira oo ay ka mid yihiin Fatahaadaha.
Kulanka ayaa si gaar ah looga hadlay wax ka qabashada fatahaadaha, COVID-19 iyo ayaxa oo kamid ah xaaladaha ugu daran ee xilligaan dhibaatada ku haya dalka.
Kulanka intii uu socday waxaa la isla gartay in la sameeyo guddi isku dabarida oo ka shaqeeya howlaha ku xeeran wax ka qabashada, mudnaan siinta iyo dardar gelinta dadaallada lagu yareynayo qatarta.
Xamza Saciid Xamza oo ah wasiirka Gargaarka dowladda Soomaaliya oo Shirka Faahfaahiyay ayaa sheegay in dowlada Soomaaliya ay dadaal badan ku bixin doontoo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ay ka mid yihiin Fatahaadaha.
Kulan ku saabsan xaaladaha degdegga ah